Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Dad Shacab Ku Rasaaseeyay Xamarweyne. – Bogga Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Dad Shacab Ku Rasaaseeyay Xamarweyne.
December 29, 2016 6:52 am Views: 10
Saacadihii lasoo dhaafay waxey maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka tiro dad shacab ah ku rasaaseeyeen goobo kala duwan oo ka tirsan degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay maleeshiyaatka dowlada waxey rasaastaasi ku dhaawacmeen saddex ruux oo shacab ah kuwaasi oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaartay.
Rasaasta sida bareerka ah maleeshiyaatka dowlada federaalkaÂ ugu fureen dadka shacabka waxey si aad ah uga careysiisay dadkii shacabka ee xilligaasi ku sugnaay gudaha suuqa weyn ee degmada Xamarweyne.
Dhacdadaan ayaa kusoo aadeysa xilli habeen hore ciidamada Kufaarta Afrikaanta si bareer ah deegaanka Numbar-60 ee gobalka Shabeelada hoose ugu dileen labo ruux oo shacab ah kuwaasi oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi.
Sidoo kale labo maalin ka hor ayeey aheed markii maleeshiyaatka dowlada federaalka gudaha suuqa degmada Wadajir ee magaaladan Muqdisho si bareer ah ugu dileen labo ruux oo ka mid aheed ganacsatada suuqa degmada Wadajir.